February 16, 2020 - MM Live News
February 16, 2020 February 18, 2020 MM Live News
သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာလေးအကြောင်း မသိသူတွေအတွက် ဗဟုသုတအဖြစ်ပြောချင်ပါတယ် …. သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်က၂၇ခေါက်ကျော်ရင် အိမ်စောင့်နတ်၊ကိုယ်စောင့်နတ်တောင်နေမရတော့ပါဘူး…. ပြိတ္တာကတော ဂါထာအစကြားတာနဲ့ တစ်ချိုးတည်းလစ်ပြေးပါတယ်… ကျောင်းထိုင်ပြတ္တာကြီးတွေ အခြားဂါထာတွေပရိတ်တွေလိုက်ဆိုပြနိုင်ပေမယ့် သမ္ဗုဒ္ဓေစရွတ်တာနဲ့လစ်ပြေးတာပါပဲ…. ပြေးတဲ့နောက်ကလိုက်ရွတ်၊သူကိုယ်ရောင်မဖြောက်ပြေးနိုင်ပါဘူး…. သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်တစ်နေ့တစ်ထောင်မကရွတ်ရင် နတ်တွေတိမ်ကြားမင်းတွေထက်တောင်ဘုန်းကြီးလာနိုင်ပီး စိတ်က တောင့်တရင် သူတို့တွေကောင်းကောင်းနေမရပါဘူး…. လိုက်ဖြေစည်းပေးရပါတယ်….သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်ဟာနေမင်းကြီးနဲ့တူပါတယ်… သဲစုမကဘုရားတွေရှိခိုးရတာကြောင့် အရမ်းအစွမ်းထက်ကြောင်းအနည်းငယ် ဗဟုသုတအနေနဲ့ တင်ပြလိုက်ပါတယ်…. သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာ မြန်မာပြန် (၁) သမ္ဗုဒ္ဓေ အဋ္ဌဝီသဉ္စ၊ ဒွါဒသဉ္စ သဟဿကေ။ ပဉ္စသတ သဟဿာနိ၊ နမာမိ သိရသာမဟံ။ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူသော ဘုရားရှင်၊ တစ်သောင်းနှစ်ထောင်သောဘုရားရှင်၊ ငါးသိန်းသောဘုရား ရှင် (၅၁၂ဝ၂၈ ဆူသော ဘုရားရှင်)တို့ကို ဦးခေါင်းဖြင့် ရိုသေစွာရှိခိုးပါ၏။ (၂) အပ္ပကာ ဝါဠုကာ ဂင်္ဂါ၊ အနန္တာ နိဗ္ဗူတာ ဇိနာ။ တေသံ ဓမ္မဉ္စ သံဃဉ္စ၊ အာဒရေန […]
အပြိုစငျတဈယောကျဟာ အအိုဖွဈသှားဖို့ဆိုတာ.. မိနဈပိုငျးပဲကွာပမေယျ့…
February 16, 2020 February 16, 2020 MM Live News
ယောကျာင်္းပီသတဲ့ ယောကျာင်္းလေးတိုင်းက ဒီစာလေးကို လက်ခံသလို မိန်းမပီသတဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းကလည်း ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်တန်ဖိုးထားစေချင်တယ် ယောက်ျားပီသကြပါစေ.. ဆူးပေါ်ဖက်ကျလဲဖက်ပေါက်တယ်.. ဖက်ပေါ်ဆူးကျလဲဖက်ပေါက်တာပါပဲ…. မိန်းခလေးတစ်ယောက်ရည်းစားထားတယ်ဆိုတာ……ဘ၀နဲ့ရင်းရတဲ့ တိုက်ပွဲတစ်ခု…… ပန်းတစ်ပွင့်ဟာ မိခင်ပင်ရင်းရင်ခွင်က ဝေးကွာသွားတာနဲ့ ညိုးနွမ်းရမှာအသေအချာပါ…… မြတ်နိုးတယ်ယူဆပြီး.. အခူးခံပန်းတစ်ပွင့်က ခူးယူသူကိုပဲပန်စေချင်ကြတာပါပဲ….. ဒီလိုပဲ….ကိုယ့်ကိုချစ်လာတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက် လက်ထဲမှာဘ၀ကိုရင်းပေးခဲ့တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ… ထိုသူကိုပဲတစ်သတ်လုံး လက်တွဲသွားချင်တာဟာ.. မိန်းမတိုင်းအမြဲမက်တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုပါ.. အပျိုစင်ဘ၀ဆိုတာ.. မိန်းခလေးတစ်ယောက်အတွက်.. အသက်ထက်တောင် တန်ဖိုးရှိပါတယ်တဲ့….. ဒါကြောင့်.. ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိ့မယ်ဆိုရင်.. မိမိချစ်သူရဲ့အပျိုစင်ဘ၀ကို.. တန်ဖိုးထားပေးပါ….. အသစ်ပြန်ပွင့်ဖူးနိုင်တဲ့ပန်းတစ်ပွင့်မဟုတ်လို့……ဘယ်တော့မှခူးယူဖို့ မကျိုးစားမိပါစေနဲ့…… ခူးယူလိုက်ပီဆိုတည်းကညိုးနွမ်းသွားမှာအသေအချာပါပဲ…..ခူးယူမိခဲ့ရင်လဲ.. မလွင့်ပစ်ပါနဲ့.. ညိုးညိုးနွမ်းနွမ်း…. ဆွေးမြေ့မြေကျသွားသိတိုင်..တန်ဖိုးထားပါ…. မိန်းခလေးတစ်ယောက်က သူရဲ့အပျိုစင်ဘ၀ကိုပေးတယ်ဆိုတည်းက သူဘ၀တစ်လျှောက်လုံးစာကို မိမိအတွက်စတေးလိုက်ခြင်းပါပဲ….. အပျိုစင်တစ်ယောက်ဟာ အအိုဖြစ်သွားဖို့ဆိုတာ.. မိနစ်ပိုင်းပဲကြာပေမယ့်….အအိုတစ်ယောက်ကအပျိုစင်ပြန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့….ရွှေငွေပုံပေးလဲမရနိုင်တော့ပါဘူး.. အခုခေတ်မှာ ဆယ်ခြောက်…..ဆယ့်ခုနှစ်လောက်ထဲက.. ရည်းစားထားနေကြပီ….. ခောတ်စနစ်ရဲ့တိုက်စားမှု့ကြောင့် Living together တွေဖြစ်ကုန်ကြပီ.. မဖြစ်သင့်ပေမယ့်…. […]
မွနျမာနိုငျငံထဲမှ လြှို့ဝှကျ တရုတျမွို့တျော…
February 16, 2020 MM Live News
မြန်မာနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံအကြား အရေးပါဆုံး ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကရင်ပြည်နယ်တွင်ရှိပြီး မြဝတီမြို့နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့တို့ကို ချစ်ကြည်ရေးတံတားဖြင့် ဆက်သွယ်ထားသည်ထိုသို့ စည်ကားလှသော ကုန်သွယ်ရေးအချက် အခြာ နေရာရှိနေသော်လည်း မကြာသေးမီက ရွှေကုက္ကိုဆိုသည့် စီမံကိန်းသစ်တစ်ခုကို လူမသိသူမသိ တိတ်တဆိတ် စတင်ခဲ့သည် ရွှေကုက္ကိုသည် မြဝတီမြို့ မြောက်ဘက် ၁၅ ကီလိုမီတာခန့်တွင် တည်ရှိသည့် တံငါရွာလေးတစ်ရွာသာဖြစ် သည် သာမန်ကာလျှံကာကြည့်လျှင် ခပ်ခေါင်ခေါင် ကျေးလက်ဒေသ ရွာသိမ်ရွာငယ်လေး တစ်ရွာတွင်ပြုလုပ်သည့် ရွှေကုက္ကို စီမံကိန်းမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ မရှိပါ။ သို့သော် အနီးကပ်လေ့လာကြည့်လျှင်မူ စာရှုသူများ အံ့ အားသင့်သွားမည်ဖြစ်သည် ယခုတည်နေသောမြို့သည် ဟောင်ကောင်မြို့ပမာဏမျှရှိသည့် မြို့အသစ်စက်စက် ဖြစ်သည်။ တရုတ်အစိုးရက ထောက်ပံ့သည့်ငွေဖြင့် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတစ်ခုက လူမသိသူမသိ တည်ဆောက်နေခြင်း၊ စိစစ်ကြီးကြပ်မှု မရှိ တည်ဆောက်နေခြင်း […]
ည‌နေ(၄)နာရီခနျ့က (၃၈မိုငျ)အောကျအကှဆေို့ငျး‌ခေါငျရှာအဝငျတှငျ ယာဉျမတျောတဆမှုဖွဈစဉျ…
မူဆယ်​ လာရှိုး မန္တ​လေး လမ်း ယာဉ်​မ​တော်​တဆမှု ၁၆-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့ည‌နေ(၄)နာရီခန့်ကကွတ်ခိုင်မြို့နယ် မန်ပြိန်း(၃၈မိုင်)အောက်အကွေ့ဆိုင်း‌ခေါင်ရွာအဝင်တွင်ဖြစ်ပွားသောယာဉ်မတော်တဆဖြစ်စဉ်…. နေရာမှသိန္နီဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ နေလင်းသစ္စာယာဉ်လိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ၁။ကိုနေစိုးလတ်၊ကံမမြို့။ ၂။ကိုရာဇာဌေး ၃။မောင်စောလင်း၊ဂုံးမင်းရွာ၊ပေါက်မြို့နယ် ၄။မောင်ဇော်ဝင်းမောင်၊မျှားပိုင်ရွာ၊ပေါက်မြို့နယ် ၅။မမိုးမိုးလင်း၊အိုးမျှင်ရွာ၊ပေါက်မြို့နယ် ၆။ကိုဇော်မျိုးထက်၊ဝဲပင်အင်းရွာ၊ပေါက်မြို့နယ် ၇။မအိအိလှိုင်၊ဝဲပင်အင်းရွာ၊ပေါက်မြို့နယ် ၈။မောင်အောင်သူရထွန်း၊ရွာသစ်ရွာ၊ကသာမြို့နယ် ၉။ကိုမင်းကြိုင်၊ပေါက်မြို့နယ် ၁၀။မဝတ်ရည်အောင်၊အရာတော်ရွာ၊ပခုက္ကူမြို့နယ် ၁၁။မဆွေဆွေမာ၊မင်းလမ်းတောင်ရွာ၊ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် ၁၂။ကိုမျိုးကို၊ငါးမြလေးရွာ၊ပခုက္ကူမြို့နယ် ၁၃။ကိုကောင်းမြတ်ဟိန်း၊အလယ်တောင်ရွာ၊ရေစကြိုမြို့နယ် ၁၄။ကိုအောင်ကျော်မျိုး၊အလယ်တောင်ရွာ၊ရေစကြိုမြို့နယ် ၁၅။ကိုကောင်းကောင်း၊မင်းလမ်းတောင်ရွာ၊ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် ၁၆။မောင်ငြိမ်းဌေး၊ထန်းရင်းကျေးရွာ၊ပေါက်မြို့နယ် ၁၇။မဥမ္မာဌေး၊ထန်းရင်းကျေးရွာ၊ပေါက်မြို့နယ် ၁၈။မသင်းသင်းခိုင်၊မြောက်ကပိုင်ရွာ၊ပေါက်မြို့နယ် ၁၉။မကျင်ဌေး၊မြောက်ကပိုင်ရွာ၊ပေါက်မြို့နယ် ၂၀။ကိုအောင်သူထွန်း၊ရွာသစ်ရွာ၊စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ၂၁။မအိအိငြိမ်း၊ဇီးဖြူကုန်း၊ပေါက်မြို့နယ် ၂၂။မခင်စုစုထွန်း၊ရဲတရော်ရွာ၊စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ၂၃။မအေးမာချို၊ဝဲပင်ရွာ၊ပေါက်မြို့နယ် ၂၄။မဝတ်ရည်အောင်၊အရာတော်ရွာ၊ပေါက်မြို့နယ် ၂၅။ကိုဇေလတ်၊ရပ်ကွက်(၂)ကံမမြို့ သေဆုံးသူမရှိပါ။ #အနှိုင်းမဲ့ကုသိုလ်​လူမှု့ကူညီ​ရေးအသင်း သိန်းနီမြို့ unicode မူဆယျ လာရှိုး မန်တလေး လမျး ယာဉျမတျောတဆမှု ၁၆-၂-၂၀၂၀ ရကျနညေ့‌နေ(၄)နာရီခနျ့ကကှတျခိုငျမွို့နယျ မနျပွိနျး(၃၈မိုငျ)အောကျအကှဆေို့ငျး‌ခေါငျရှာအဝငျတှငျဖွဈပှားသောယာဉျမတျောတဆဖွဈစဉျ နရောမှသိန်နီဆေးရုံသို့ပို့ဆောငျကူညီပေးခဲ့ပါသညျ။ နလေငျးသစ်စာယာဉျလိုငျးဖွဈပါသညျ။ ၁။ကိုနစေိုးလတျ၊ကံမမွို့။ ၂။ကိုရာဇာဌေး ၃။မောငျစောလငျး၊ဂုံးမငျးရှာ၊ပေါကျမွို့နယျ […]
“စိတ်မကောင်းစရာယဉ်တိုက်မှု” အုတ်တွင်းမြို့ အနောက်ဘက် ပြည်လမ်းပေါ်၌ ဆိုင်ကယ်စီးလာသော အမျိုးသား အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးငယ်လေးတို့ မိသားစု(3)ဦး အုတ်တွင်းမြို့ မှ တိုင်းဗဟို(6)သို့အပြန် နတ်စင်ကုန်း ကျေးရွာအနီး ကျွဲလှည်းမှ ကျွဲများလန့်၍ လမ်းပေါ်ဆွဲတက်ချိန် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ….. လှည်းအား ဝင်တိုက်မိမှုဖြစ်ပွါးရာ ၁နှစ်ခွဲခန့်ကလေးငယ်မှာနေရာတင်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံး၍ အမျိုးသမီးဖြစ်သူ မမေဦးမှာ ညာခြေပေါင်လည်ကျိုး/လက်နှစ်ဘက်လုံးကျိုးသည့်ဒဏ်ရာများရရှိကာ အုတ်တွင်းဆေးရုံမှ တောင်ငူဆေးရုံကြီးသို့ အရေးပေါ်အချိန်မှီကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါပြီ။ အမျိုးသားဖြစ်သူမှာ အခင်းဖြစ်စဉ်သတိမေ့နေပြီး ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်စဉ်သတိပြန်ရ။အခင်းဖြစ်ချိန် (15.2.2020) ည(8:10)ခန့် (ဖြစ်စဉ်တင်ပြခြင်းမှာ မျက်မြင်သိသူတစ်ဦးပြောပြချက်အရ)(ရင်ထဲစို့နင့်စွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်) ယာဉ်မောင်း ကိုသန့်စင်ဦး အကူ ဒေါ်စန်းမြင့်၊ကိုဇွဲကို (15.2.2020) (8:30)pm အရှင်တေဇ(နာယကဆရာတော်) ရင်ခုန်သံ ရှင်ရေးကူညီမှုအသင်း နှင့် ခိုကိုးရာမဲ့ဘိုးဘွားစောင့်ရှောက်ရေး ဈေးကျောင်းတိုက်၊အုတ်တွင်းမြို့  unicode “စိတျမကောငျးစရာယဉျတိုကျမှု” အုတျတှငျးမွို့အနောကျဘကျ ပွညျလမျးပျေါ၌ ဆိုငျကယျစီးလာသော အမြိုးသား […]
အရဟံပုတီးစိပျနညျးကွောငျ့ ဆငျးရဲသား ( ကြောမှဲစဈစဈ ) ဘဝကနေ ဆနျစကျပိုငျရှငျ သူဌေးကွီးဖွဈသှားတဲ့ “ အရဟံ ဦးဆငျ
အရဟံပုတီးစိပျနညျးကွောငျ့ ဆငျးရဲသား ( ကြောမှဲစဈစဈ ) ဘဝကနေ ဆနျစကျပိုငျရှငျ သူဌေးကွီးဖွဈသှားတဲ့ “ အရဟံ ဦးဆငျ “ ငဆငျ နငျ့ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ခုမှ အ ရဟံ ဂုဏျတျော ကိနျးတယျ ဟ ။ နငျ ထူးခွားတော့မယျ ။ ဆကျကွိုးစား ကွားလား ” ( အဘိဓဇမဟာရဋ်ဌဂုရု မစိုးရိမျဆရာတျောကွီး ) စဈကွီး ပွီးခါစလောကျက မန်တ လေးမွောကျဘကျ မတ်တရာနယျက ပိုငျရှာ တဈဝိုကျမှာတော့ “ အရဟံ ဦးဆငျ ” ဆိုတာ မသိသူ မရှိသလောကျလို့ ဆိုရလောကျအောငျ လူသိမြားခဲ့ပါတယျ ။ သူ့ကို လူတှေ အသိမြားတာဟာဆနျစကျပိုငျရှငျ သူဌေးကွီးတဈဦးဖွဈလို့ဆိုတာထကျအင်ျကြီဗလာ ၊ လုံခညျြဖာတဈရာနဲ့နှား ကြောငျး […]
မိတျဆှမြေားအားလုံးအတှကျ (၁၆)ရကျမှ ၊ (၂၃)ရကျအတှငျး ဆောငျရနျ ၊ ရှောငျရနျ ၊ သတိပွုရနျ ၊ ယတွာပွုရနျ (၁)ပတျစာ ဟောစာတမျး
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၆)ရက်မှ ၊ (၂၃)ရက်အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင်သည့် ကောင်းသောဟောချက်များ မှန်ကန်၍ ၊ အနိဌသဘောဆောင်သည့် မကောင်းသောဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း။ …. ။ မိတ်ဆွေတို့၏ကောင်းကျိုးများကို အစဉ်လိုလားသော မင်းသိမ်းခိုင် (ရွှေရမ်းထူးလင်း) ဆောင်းအကုန် နွေအကူးကာလ၏ ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ်ရာကောင်းလှသော ဖေဖော်ဝါရီလ၏နေ့ရက်များ unicode မိတျဆှမြေားအားလုံးအတှကျ ၂၀၂၀ ဖဖေျောဝါရီလ (၁၆)ရကျမှ ၊ (၂၃)ရကျအတှငျး ဆောငျရနျ ၊ ရှောငျရနျ ၊ သတိပွုရနျ ၊ ယတွာပွုရနျ (၁)ပတျစာ […]